January 12, 2019 | Kichuu
Tokkummaan Gumii Abbotti Gadaa Oromiyaa. Finfinee, Galma Gidugala Aadaa Oromootti walgahera. Waldhabdee mootummaa fii ABO gidduu jiru waraana dhaabanii dhimma isaanii araaran nu biratti fixachuu qabu jedhu Stop the war between government and various armed [Read More]
Iyyaa iyya dabarsaa mootummaan Itoophiyaa ummata qeellam wallaggaa HELEKOPTERAAn rukutaajira. Oromoo teeysanii walirratti hin laalinaa! AMAJJII 12,2019) Har’a sa’aa 5:00 fi 6:00 gidduutti #Helekoopterootniwaraanaa mootummaa EPRDF lama Godina Qellem Wallaggaa Gidaamii Qellem bakka Burii jedhamu irra [Read More]
Yunivarsiti Adaamaatti ijjoollee oromoo akkas godhaa jiru. Yeroo darbee ijjoollee 3 ajjeesanii Yunivarsiti Adaamaatti ijjoollee oromoo akkas godhaa jiru. Yeroo darbee ijjoollee 3 ajjeesanii. 😡 Surrii tokkoof kitaabni tokkoo hubannoof jechoota wal qixaa qabachuu danda’u. Surrii [Read More]
Lolaa fi olola ABO fi WBO irraatti bifa kamiinu oofamu of-irraa ittisuun dirqama Oromummaati! ————–(Jaboo Jajjabo)———– Obbo Leencoo fi Dr. Diimaa OBN irratti haasa’uu isaanii dhaga’ee. Na hin dinqine! Namoota kana bara 2006 keessa Oslootti [Read More]
Poolisii: Qarshii baankii miiliyoona 80 saamuun kan shakkaman to’annoo jala oolan Asittis baankiin saamameera; lakkii warri saamichatti muuxannoo qabdan nurraa dhaabbadhaa! Nuti hojjannee malee, saamnee guddachuu hin beekne; beekuus hin barbaadnu!! Isa dhihaa kana WBO’tu [Read More]
Breaking News: Mootummaan naannoo Amaaraa teessoo isaa Finfinnee taasifachuuf ijaarsa isaa Finfinneetti jalqabe Biraanuu Juulaa Abbaa Torbee fi humnoota kaan Qeellam keessaa guurree hiineerra jedhe. Har’ammoo Baankiin saamame jechuutti jiru. Bakka waan hundaa hiitanitti eenyutti [Read More]
ODP clearly saw a threat from OLF. They know they have no chance against it in free and fair election. Stupid shanee people played along saying “we have army, we can defend ourselves” as if [Read More]
Lies never build a house rather destroy homes! By Habte Gutama “The firsthand information I have from Western Oromiya about the OLA’s ( Oromo Libration Army) operations and discipline is in sharp contrast to what [Read More]